ZBN နိုက်ထရိုဂျင်မီးစက် - တရုတ်ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲနပစ္စည်း
compressed လေထု filter ကို
ZAJ filter ကိုပိုးသတ်
ZNH hydrofining ကိရိယာများ
ZBN Psa နိုက်ထရိုဂျင်ချမှတ်ခြင်း device ကို
PSA ဖိအားလွှဲထိစိမ့်နိုက်ထရိုဂျင်ချမှတ်ခြင်းစက်ဟန်ကျိုး Poly လေကြောင်းခွဲခြာပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း Co. , Ltd, တစ်ဦးအခြို့သောဖိအားအောက်တွင်တစ်ခုစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်မားကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါသုံးပြီးဖိအားလွှဲထိစိမ့်၏နိယာမ မှစ. နိုက်ထရိုဂျင်၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံသည်၏နိယာမ လေ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ချုံ့လေထု၏သန့်စင်ပြီးနောက်လေဟာနယ်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအတွက်ထိစိမ့်နှင့်အ desorption များ၏ဖိအားပေးမှု။ ကာဗွန်မော်လီကျူး Sie အတွက်လေခွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, အောက်စီဂျင်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကြောင့် ...
Ltd. , ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်ဟန်ကျိုး Poly ဝေဟင်ခွဲခြာပစ္စည်းကိရိယာများ, တယောဖိအားအောက်မှာတစ်ခုစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ်လေထဲကနိုက်ထရိုဂျင်များထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးမြင့်မားကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါသုံးပြီးဖိအားလွှဲထိစိမ့်၏နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်။ ခြောက်သွေ့တဲ့ချုံ့လေထု၏သန့်စင်ပြီးနောက်လေဟာနယ်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအတွက်ထိစိမ့်နှင့်အ desorption များ၏ဖိအားပေးမှု။ ကြောင့်လေခွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုငှါ, ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါအတွင်းရှိအောက်စီဂျင်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းနိုက်ထရိုဂျင်၏ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အောက်စီဂျင်ဦးစားကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါများကစုပ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အဆင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။ ပြီးတော့ဖိအားပုံမှန်ဖိအားလျှော့ချခဲ့သည်, ထိုစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအောက်ဆီဂျင်နှင့်အခြားအညစ်အကြေးမှပူးတွဲပါခဲ့ပါတယ်။ ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာနှစ်ခုထိစိမ့်တာဝါတိုင်နိုက်ထရိုဂျင်ထိစိမ့်စွမ်းရည်များထဲမှမျှော်စင်, အခြားမျှော်စင် desorption သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏စနစ်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်အဖွင့်နှင့်အပိတ်ပွဲကိုထိန်းချုပ်ဖို့ PLC Program ကို Controller ကိုတဆင့်နှစ်ခုတာဝါတိုင်သံသရာနိုင်အောင်အထွေထွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, အရည်အသွေးမြင့်နိုက်ထရိုဂျင်ရည်ရွယ်ချက်။ compressed လေထုသန့်စင် module, လေသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့, အောက်ဆီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာကိရိယာနိုက်ထရိုဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့: အဆိုပါစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
1, compressed လေထုသန့်စင်အစိတ်အပိုင်းများ
အဆိုပါလေကြောင်းပထမဦးဆုံးရေနံအများဆုံးဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုက် filter ကို မှစ. , ချုံ့လေထုသန့်စင်အစိတ်အပိုင်းများသို့ချုံ့လေကြောင်းရှောက်သွားချုံ့လေထုများကိုတွန်း, ရေ, မြေမှုန့်, ရေအေးခဲလေမှုတ်စက်ထပ်မံဖြည့်စွက်, ဒဏ်ငွေ filter ကိုရေနံ, ဖုန်မှုန့်နှင့်သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် နက်ရှိုင်းသောသန့်စင်ဘို့အစွန်းရောက်တိကျစွာ filter ကိုပါ။ စနစ်အခွအေနေအရ, လေထု၏လေထုခွဲခြာစနစ်ကအသေးစားရေနံထိုးဖောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတားဆီးနှင့်ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါများအတွက်လုံလောက်သောကာကွယ်မှုပေးရန်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာကိုဖယ်ရှား compressed ဝေဟင်ဆီစုတခုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်လေထုသန့်စင်အစိတ်အပိုင်းများတင်းကျပ်သောဒီဇိုင်း။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်ကုသခံနေရပြီးနောက်သန့်ရှင်းတဲ့လေကောင်းလေတူရိယာလေကြောင်းအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
အဆိုပါလေကြောင်းအကြံပေးအဖွဲ့စီးဆင်းမှု pulsation, ကြားခံလျှော့ချရန်ဖြစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ PSA အောက်စီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာယူနစ်ဝန်လျှော့ချဖို့, ချောမွေ့စွာချုံ့လေကြောင်းနိုင်အောင်ချုံ့လေထုသန့်စင်အစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့်, အပြည့်အဝရေအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အားဖြင့်, စနစ်အတွက်ဖိအားပွောငျးခွငျးလျှော့ချ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ပြောင်းစုပ်ယူမှုကိုမျှော်စင်အတွက်ကြောင့်လည်း PSA အောက်စီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာစက်ပစ္စည်းအတွက်ချုံ့လေကြောင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က, အထိစိမ့်မျှော်စင်ဖိအားလျင်မြန်စွာအလုပ်၏ဖိအားမြင့်တက်မှုအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ပေးပါသည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာသေချာ နှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး။
3, အောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာ device ကို
အထူးကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါနှင့်အတူထိစိမ့်မျှော်စင်စင်ကြယ်ချုံ့လေထုဟာတစ်ဦးကမျှော်စင်ဝင်ပေါက်ဝင်သောနှင့်ထွက်ပေါက်အဆုံးကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါတဆင့်စီးဆင်းတဲ့အခါ, O2, CO2 နှင့် H2O စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သော A နှင့် B တွင်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်စီးနေသည် အဆိုပါထိစိမ့်မျှော်စင်၏ထွက်ပေါက်အဆုံးကနေ။ အချိန်ကာလပြီးနောက်, ကာဗွန်ဤအချိန်တွင်မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်မျှော်စင်အေ, တစ်ဦးကရဲတိုက်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်ထိစိမ့်, နိုက်ထရိုဂျင်၏အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် B ကိုမျှော်စင်, နှင့် A မျှော်စင်မော်လီကျူးဆန်ခါသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးသို့လေကြောင်းစီးဆင်းမှု compressed ။ ယင်းမော်လီကျူးဆန်ခါ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးသည့်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သော O2, CO2 နှင့် H2O ဖယ်ရှားရန်လေထုဖိအားဖို့ထိစိမ့်မျှော်စင်၏လျင်မြန်စွာနွယ်ဖွားများကသဘောပေါက်သည်။ နှစ်ဦးကကော်လံတနည်းစုပ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ခွဲခြာနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏စဉ်ဆက်မပြတ် output ကိုဖြည့်စွက်ရန် regenerated ခဲ့ကြသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်သည် Programmable ယုတ္တိဗေဒ controller ကို (PLC) ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်အရွယ်အစားအစုံတန်ဖိုးကို၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏အခါထွက်ပေါက်အဆုံး, PLC အစီအစဉ်အလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ဆို့ရှင်ဟာအရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းပါဘူးဆိုတာသေချာ, ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအော်တိုနိုက်ထရိုဂျင် emptying ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်လည်ပတ်ဆူညံသံတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဓာတ်ငွေ့ရင်ဖွ 75dBA ထက်လျော့နည်းသည်။
နိုက်ထရိုဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တည်ငြိမ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပေးဝေရေးသေချာစေရန်ဖိအားများနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်စီဂျင်ခွဲခြာ system ထဲကနေကွဲကွာနိုက်ထရိုဂျင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဟန်ချက်ညီများအတွက်အသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ပြောင်းစုပ်ယူမှုကိုမျှော်စင်အတွက်ကထိစိမ့်မျှော်စင်အားသွင်းဖို့ဓာတ်ငွေ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, စုပ်ယူရဲတိုက်ကိုလက်အကူအညီနဲ့တိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းအိပ်ရာကာကွယ်ထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေကိုယ်နှိုက်ကြလိမ့်မည်ကို၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ အလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာ။
flow: 3-1000Nm / ဇသန့်ရှင်းစင်ကြယ်: 95% -99,9995%
နှင်းအချက်: ထက် -40 deg C ကိုလျော့နည်း: ချိန်ညှိဖိအား 0.6Mpa ထက်လျော့နည်း
လေထု၏မြင့်မြန်နှုန်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ 1 မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြည်တွင်းရေးအစိတ်အပိုင်းများ, လေဖြန့်ဖြူးတူညီနေမှု။
ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါ၏ဘဝတိုးချဲ့ဖို့3ထူးခြားတဲ့မော်လီကျူးဆန်ခါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအမံများ။
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန်4အသိဉာဏ် interlocking အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ပစ္စည်းကိရိယာများ။
5 optional ကိုနိုက်ထရိုဂျင်စီးဆင်းမှုနှုန်းအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အဝေးထိန်းစနစ်။
6 လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသော, တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးအလိုအလျောက်မြင့်မားဒီဂရီ, မောင်းသူမဲ့စစ်ဆင်ရေးအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သတ္တုအကာအကွယ်ဓာတ်ငွေ့အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်, နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့်တင့်ကားအမျိုးမျိုး, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းပိုက်လိုင်းဓာတ်ငွေ့သန့်စင်, ရာဘာ, ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များကုန်ထုတ်လုပ်ရေး, အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းအိပ်ဇောအောက်စီဂျင်လတ်ဆတ်-စောင့်ရှောက်ခြင်းထုပ်ပိုး, အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းတွင်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ဖုံးလွှမ်းဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းနိုက်ထရိုဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်တရားစွဲဆိုထုပ်ပိုး နှင့်ကွန်တိန်နာအောက်စီဂျင်အိပ်ဇော, အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုများနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်လုပ်မှုဆီမီးကွန်ဒတ်တာစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အကာအကွယ်ဓါတ်ငွေ့။ အဆိုပါသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, စီးဆင်းမှုနဲ့ဖိအားကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ယခင်: VPSA ဖုန်စုပ်အောက်ဆီဂျင်မီးစက်
နောက်တစ်ခု: ZBO အောက်ဆီဂျင်မီးစက်
ကွန်တိန်နာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
တာရှည်ခံအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဓာတ်ငွေ့ Generator ကိုစက်ရုံ
ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဆေးပညာအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Generator ကိုဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Generator ကိုသတ်မှတ်မည်
နိုက်ထရိုဂျင် Generator ကိုစက်
နိုက်ထရိုဂျင် Generator ကိုနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ
Oxy Generator ကို
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
စက်ရုံပါဝါ Generator ကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့
စက်ရုံ Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
အိတ်ဆောင်အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ထုတ်လုပ်သူဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင် Generator ကို
အသေးစား Biogas Generator ကို
လိပ်စာ: အမှတ် 2, စက်ရုံလမ်း, Xindeng မြို့, Fuyang, ဟန်ကျိုး, Zhejiang ပြည်နယ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 571 6343 0099
ဖက်စ်: +86 571 6343 0098
VPSA လေဟာနယ်ဖိအားလွှဲထိစိမ့် tec ...
အပူပိုင်းဖြစ်စဉ်ကို desulphurization နည်းပညာ
Psa decarbonization နည်းပညာ